Akụkọ - Ọ bụ karịa mma bọọlụ ka mma?
E jiri ya tụnyere ndị nkịtị "atọ-agụba ofufe", na "ise-agụba ofufe" nwere obosara uzo nnweta ikuku, na mgbanwe ọnụ ọgụgụ nke ifufe gbapụrụ ọsọ ukwuu n'ime anọ Kwadobe. Ọ bụrụ na a fụọ “onye na-agba agụbọ ise” n’otu ntabi anya, ọ gaghị adị njọ. Nkasi obi na obere mkpọtụ, ọ dabara adaba maka ụmụ amaala na-atụ egwu mkpọtụ mgbe ha na-ehi ụra.
Igwe ikuku na ike ikuku nke ikuku eletrik na-enwekarị ihe jikọrọ ya na moto na fan nke ọkụ eletrik. N'ikwu okwu n'ozuzu, ka mma nke ọkụ eletrik, ka mma ikuku na-enweta nsonaazụ. Ọ bụ ezie na ọ ga-abawanye ibu ahụ, ka ọ na-eme ka mmapụta pupụtara, nke ka nke “ifufe” pere mpe, a ga-egbutu ya, na-eme ka ikuku ikuku ya dị nro ma mechie mmetụta nke ọma.
"Onye ofufe ise ahụ" na-ejikarị ụkpụrụ nke nku nku ụgbọelu na nke na - eme ya. Fans e mere iji ụkpụrụ ndị a nwere njirimara doro anya nke arụmọrụ dị elu na obere mkpọtụ.
Yabụ, "ndị na-amasị agụba anọ" na "ndị nwere ihu ọma ise" kariri ọdịnala "ndị na-akwado ụzọ atọ"? Ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na n'ịtụle njirimara nke ntụgharị ntụgharị, eriri nke ndị na-agba elektrik n'ozuzu bụ akara adabaghị adaba. Fans eletrik nwere puru iche na-agụ ọnụ na-emegharị ma na-emebi mgbe ọ na-agagharị. Ya mere, ọ na-atụ aro ka ọha na eze họrọ electric Fans na iberibe-nọmba pupụtara.
Kedu ihe kpatara agba bọọlụ ọkụ ọkụ eletrik enweghị ike ịtụgharị
1. The moto aro na jammed, ị ga-amara site flipping na ofufe peeji nke aka, ihe ngwọta bụ ịgbakwunye mmanụ n'ite
2. The amalite capacitor agbajikwa, ya bụ, a nwa ma ọ bụ na-acha ọcha square plastic shei akụkụ ofu na kposara na azụ nke moto. Onye nwere waya abụọ na-eduga. Ọ bụrụ na e nwere ngwá ọrụ, ịnwere ike ịlele capacitance. Ọ bụrụ na e nweghị ngwá ọrụ, ị nwere ike ịgbanwe ya ozugbo. ntakịrị.
3. Igwe nkpuchi moto dị mkpụmkpụ ma gbaa ya ọkụ. N'ozuzu, ọ na-ada ụda mgbe ị dasịrị ike ruo nkeji ole na ole, na-agbanyeghị ya, kwụpụ ike ọkọnọ, ma jiri aka gị metụ moto ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị ezigbo ọkụ, enwere ike ịgba ya ọkụ ma mee ka ọ dị mkpirikpi.
Ihe ndị ọzọ na-agba agba dị mma? Na nchịkọta, ọkụ eletrik nke nwere okpukpu ise ga-eme ka ifufe karịa ifufe eletrik atọ, yabụ onye na-ahụ ọkụ eletrik nwere ọtụtụ ahịhịa maka ndị mmadụ Ọ ga-aka mma. Mgbe ịzụrụ onye ọkụ eletrik, ị nwere ike ịhọrọ ngwaahịa na ahịhịa 5 ma ọ bụ 6. Ọ bụrụ na onye na-agba ọkụ nke ọkụ eletrik na-enweta nsogbu n'oge eji, dị ka ọnọdụ na ọ naghị atụgharị ma ọ bụ mebiri emebi, a ga-edozi ya n'ụzọ ezubere iche ka ọ ghara imetụta ojiji nke ọkụ eletrik ahụ kwa ụbọchị.